St. Maarten: Booqdayaasha si buuxda u talaalan uma baahna baaritaanka COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Sint Maarten Breaking News » St. Maarten: Booqdayaasha si buuxda u talaalan uma baahna baaritaanka COVID-19
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Sint Maarten Breaking News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
St. Maarten: Booqdayaasha si buuxda u talaalan uma baahna baaritaanka COVID-19.
Wasiir Cumar Ottley wuxuu ku dhawaaqay intii lagu guda jiray shir jaraa'id in laga bilaabo 1-da Noofembar 2021, dadka si buuxda loo tallaalay aysan mar dambe u baahnaan doonin baaritaanka COVID-19 si ay u galaan St. Maarten.
Xeer cusub ayaa lagu dabaqi karaa dadka socotada ah ee si buuxda loogu tallaalay tallaalada la ansixiyay ee RIVM iyo ururka WHO.
Culayska fayraska ee qof si buuxda loo tallaalay, oo qaba COVID-19, ayaa aad uga hooseeya qofka aan la tallaalin.
Wasiirka Caafimaadka Dadweynaha, Horumarinta Bulshada iyo Shaqada, Cumar Ottley ayaa ku dhawaaqay intii lagu guda jiray shir jaraa'id in laga bilaabo 1-da Noofembar 2021, dadka si buuxda loo tallaalay aysan mar dambe u baahnaan doonin baaritaanka COVID-19 si ay u galaan St. Maarten.
Kani wuxuu quseeyaa oo keliya socdaalayaasha si buuxda loogu tallaalay tallaalada la ansixiyay ee RIVM iyo ururka WHO. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in arrintani ay tahay mid ay wasaaraddu in muddo ah isha ku haysay, iyada oo cilmi baaris la xaqiijiyay lagu go’aamiyay in loo sii socdo jihadaas.
Cilmi-baaris ayaa muujisay in culeyska fayraska ee qof si buuxda loo tallaalay, oo qaba COVID-19, uu aad uga hooseeyo qofka aan la tallaalin. Tan micnaheedu waxaa weeye in kasta oo ay jiraan waxoogaa yar oo la kala qaado kiisaska dad si buuxda loo tallaalay, haddana fursadaha dadkan ay ku faafin karaan fayraska ama ay aad u xanuunsan karaan ayaa aad u hooseeya.
Wasiirku wuxuu caddeeyay in tallaalku u oggolaanayo jirkaaga inuu la dagaallamo fayraska marka infekshanku ka gudbo sanka sanka oo u gudbo dhiigga. Xanuun daran ayaa laga ilaaliyaa in la tallaalo, maadaama jirkaagu si fiican ugu diyaar garoobi doono la dagaalanka fayraska.
On St. Maarten, waxaa jira dhimashada dhimashada 1.6%, taas oo 0.04% si buuxda loo tallaalay. Boqolkiiba mid la mid ah ayaa loo diiwaangeliyaa tirada isbitaallada si buuxda loo tallaalay. "Tani waxay muujineysaa in tallaalku uu aad wax ku ool u yahay waxaanna u dhaqaaqi karnaa inaan u oggolaanno dadka si buuxda loo tallaalay inay soo galaan iyagoo aan u baahnayn baaritaan" ayuu yiri Ottley.
Wasiir Ottley wuxuu ku dhawaaqay in qorshihiisa muddada gaaban uu yahay sidoo kale inuu horumariyo COVID-19 Soo-kabashada Shahaadada Dijital ah ee COVID-19 (DCC), taas oo u oggolaanaysa dadka inay iska diiwaangeliyaan caabuqyadooda hore ayna muujiyaan caddeynta xasaanadda dabiiciga ah.
Fadlan ogow in shuruudihii dadka aan la tallaalin ay isku mid yihiin, wixii faahfaahin dheeraad ah booqo mareegaha Dawladda.
Fadlan hoos ka eeg Liiska tallaalada ay ansixisay WHO:
Pfizer / BioNTech (FDA waa la ansixiyay)